WhatsApp သည်ဘာကြောင့်အလုပ်မလုပ်သနည်း။9ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက် | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
WhatsApp သည်ဘာကြောင့်အလုပ်မလုပ်သနည်း။9ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်
Ignacio Sala | | social networking, WhatsApp ကို
များစွာသောသူတို့သည်အဘယ်အချိန်၌စိတ်ပူနေရသနည်း WhatsApp ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့်သင့်ဖောက်သည်များနှင့်ပင်ဆက်သွယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသုံးအပြုဆုံး application ဖြစ်လာသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော်ငြားဤပလက်ဖောင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လုံးဝရပ်တန့်သွားသည်။
WhatsApp အလုပ်မလုပ်သောအခါသတိရသင့်သည့်အချက်မှာအကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အကြောင်းပြချက်သည်ပလက်ဖောင်းကိုယ်တိုင်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ terminal သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အော်ပရေတာမှတစ်ဆင့်ထုတ်ပေးသောပြaနာတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြtheနာအတွက်အကြောင်းပြချက်မည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ WhatsApp ကိုထပ်မံအလုပ်လုပ်စေရန်အဖြေ ၉ ခု။
2 WhatsApp cache ကိုဖျက်ပါ
3 Force app ကိုပိတ်ပါ
5 WhatsApp ကိုအဆင့်မြှင့်တင်
6 ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ကို restart လုပ်ပါ
9 စမတ်ဖုန်းသည် WhatsApp နှင့်သဟဇာတမဖြစ်ပါ
WhatsApp ကို ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့နေသည့်ဆာဗာများကိုအသုံးပြုသည် အလုပ်လုပ်ရန် ဤဆာဗာများမှအလုပ်လုပ်ခြင်းရပ်တန့်ပါက၊ အက်ပလီကေးရှင်းသည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ SMS နှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်အင်တာနက်နှင့်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။ ဆာဗာများအလုပ်လုပ်မလုပ်သိရန်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းမှာ Down Detector စာမျက်နှာသို့သွားပါ.
Down Detector ဆိုသည်မှာ WhatsApp ဆာဗာများ၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားပေးသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ပြီးခဲ့သည့် 24 နာရီအတွင်းလျှောက်လွှာအဖြစ်အပျက်အရေအတွက်။ အကယ်၍ အဖြစ်အပျက်များစွာသည်အလွန်မြင့်မားပါက၎င်းကိုဂရပ်များ၌ပြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် WhatsApp အလုပ်မလုပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပြချက်ကိုသိပြီးဖြစ်သည်။
ဤပြproblemနာအတွက်အဖြေမရှိပါ။ ဆာဗာများနှင့်ပြtheနာများကိုစောင့်ဆိုင်းရုံသာစောင့်ရတော့မည်။ ဤပလက်ဖောင်းအလုပ်မလုပ်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုံးဝဖြတ်တောက်ခံရသောဤပြofနာအမျိုးအစားကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည် အခြားရွေးချယ်စရာစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်များကိုတပ်ဆင်ပါ como ကွေးနနျးစာ.
ဤနည်းအားဖြင့် WhatsApp ပျက်သွားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် အဆက်အသွယ်မပြတ်စေနဲ့ အခြားပလက်ဖောင်းများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ။ သိသာသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများသည် application ကို install မလုပ်ပါက၎င်းတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးသည် application တစ်ခုအားအလယ်အလတ်အရင်းအမြစ်အဖြစ်ထည့်သွင်းထားရမည်။
WhatsApp cache ကိုဖျက်ပါ
အကယ်၍ WhatsApp သည်မှားယွင်းစွာအလုပ်လုပ်လျှင်၊ cache ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း လျှောက်လွှာကိုဖယ်ရှားခြင်းကဲ့သို့သောအခြားလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုမလုပ်ဆောင်မီ၎င်းသည်ဤအပလီကေးရှင်း၏ချွတ်ယွင်းမှုအတွက်အကြောင်းရင်းဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်။
cache ကိုဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် application ၏ဂုဏ်သတ္တိများ (Android တွင်သာရနိုင်သည်) ကိုရယူပြီးခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း cache ကို.
Force app ကိုပိတ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ update လုပ်ခြင်းကို install လုပ်သည့်အခါ cache သည် application အပေါ်လှည့်ကွက်တစ်ခုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုပုံမှန်ဖျက်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ လျှောက်လွှာ၏သတင်းအချက်အလက်၏အဓိကအရင်းအမြစ် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအားသွင်းရန်။
အကယ်၍ လျှောက်လွှာသည်အလုပ်မလုပ်ပါကသို့မဟုတ်ပါကအပြောင်းအလဲကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိပါကလျှောက်လွှာကိုပိတ်ပစ်ရမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာပြင်အောက်ခြေမှသင့်လက်ချောင်းကိုလျှောချရုံသာဖြစ်ပြီး၊ လက်ဝဲမှညာသို့လျှောဆင်းခြင်းဖြင့် WhatsApp လျှောက်လွှာကိုရှာဖွေရမည်။ ဒါကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားသည်အထိတက်ချော်.
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့ application တစ်ခုကို install လုပ်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ထားပြီးသောအခြားသူများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုနှောင့်ယှက်နိုင်သည်။ အားလုံးလည်ပတ်မှုစနစ်များအတွက်တစ် ဦး အလွန်ဘုံပြproblemနာ။ ဤအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သည်မှာ application ကိုဖျက်ပြီးပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာကိုဖျက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးစကားပြောဆိုမှုမှဒေတာများကိုမဆုံးရှုံးလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရမည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ chats တစ်ခု backup လုပ်ထားပါ အပလီကေးရှင်းမှတဆင့်၊ အပလီကေးရှင်းကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်ယူရပါမည်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ WhatsApp ကစာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်းကိုချိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်၊ လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းမှ update လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလိုအပ်ချက်သည်ပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်လုံခြုံရေးပြbeenနာတစ်ခုတွေ့ရှိပါကနောက်ဆုံးရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် application ကို အသုံးပြု၍ မရပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင် WhatsApp ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းတပ်ဆင်ထားသည်ကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်၊ Android စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်အက်ပလီကေးရှင်း၊ အကယ်၍ iPhone ဖြစ်ပါက Play စတိုးသို့သာသွားရမည်။ အက်ပလီကေးရှင်းကိုရှာပါ။ အကယ်၍ Open ခလုတ်ကိုပြမည့်အစား၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုပြသပါက၊ WhatsApp ၏ပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ကို restart လုပ်ပါ
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် WhatsApp Detector ကို ဖြတ်၍ လျှောက်လွှာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဖြစ်ရပ်များနည်းပါးကြောင်းတွေ့မြင်ခဲ့ပါကဤပြtoနာအတွက်အဖြေကိုအခြားနည်းလမ်းဖြင့်ရှာရမည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ကို restart လုပ်ပါ။
WhatsApp သည် operating system (iOS / Android) တွင်ထည့်သွင်းထားသော application ဖြစ်သည်။ မည်သည့် operating system ကဲ့သို့ပင်၎င်းကိုအခါအားလျော်စွာ update လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ မှတ်ဥာဏ်ကိုလွတ်မြောက်အောင် reboot လုပ်ပါ နှင့်ကအစ၌ရှိသကဲ့သို့နောက်တဖန်အလုပ်လုပ်တယ်။
WhatsApp သည်အလုပ်လုပ်ရန်အမြဲတမ်းအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုလိုအပ်သည် ၎င်းသည်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ်ရပ်ဆိုင်းသွားလိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်မှသာလက်ခံရရှိတဲ့စာတိုကိုပြသတဲ့စာတိုပေးပို့ရေး application တစ်ခုဖြစ်လာစေမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိပါက၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုသည်အလုပ်မလုပ်ကြောင်းညွှန်ပြရုံသာမက application သည်မရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ မိုဘိုင်းဒေတာ (သို့) Wi-Fi မှတဆင့်အချိန်တိုင်းအသုံးပြုပါ။ ၎င်းကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှောက်လွှာကိုသွားပြီးသက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံဆဲလ်တာဝါတိုင်များသည်သူတို့လုပ်သင့်သည့်အတိုင်းအလုပ်မလုပ်ပါ၊ ဖြစ်နိုင်သည် တ ဦး တည်းအင်တင်နာကနေအခြားဖို့အကူးအပြောင်းကာလအတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal သည်ကျွန်ုပ်တို့၌အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိကြောင်းဆက်လက်ပြသနေသော်လည်း၊
၎င်းကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် browser ကိုဖွင့်ပြီး web page တစ်ခုဖွင့်ရန်သာလိုအပ်သည်။ ဤအရာသည်အလုပ်လုပ်ပါကအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုပြproblemနာသည် WhatsApp အလုပ်မလုပ်ရသည့်အကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါ။ စာမျက်နှာမဖွင့်လျှင်၊ ဖြေရှင်းချက် device ကို restart လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်၎င်းသည်အနီးဆုံးတယ်လီဖုန်းမျှော်စင်နှင့်မှန်ကန်စွာပြန်လည်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုပြန်လည်ရရှိစေမှာပါ။
စမတ်ဖုန်းသည် WhatsApp နှင့်သဟဇာတမဖြစ်ပါ
iOS နှင့် Android မှစီမံထားသောလက်ရှိစမတ်ဖုန်းအားလုံးသည် WhatsApp နှင့်သဟဇာတမရှိကြပါ။ WhatsApp မှယောက်ျားများသည်ပုံမှန်ဗားရှင်းများတွင်မရရှိနိုင်သည့်လုံခြုံရေးအစီအမံများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များကိုပုံမှန်ပြုလုပ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် WhatsApp မှစီမံခန့်ခွဲသောစက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်သာအလုပ်လုပ်သည်။
Android 4.0.3 နှင့်အထက်ဗားရှင်း
iOS9နဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
KaiOS 2.5.1 (သို့) ပိုမိုမြင့်မားသောဗားရှင်းများ
သင်၏ terminal ကို WhatsApp နှင့်အဆင်မပြေသောမည်သည့်ဗားရှင်းကမဆိုစီမံခန့်ခွဲလျှင် application သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ သင့်ကိရိယာကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ပါ ဒီစာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်းကိုဆက်လက်သုံးစွဲဖို့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » social networking » WhatsApp သည်ဘာကြောင့်အလုပ်မလုပ်သနည်း။9ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်
DMZ အကြောင်း - ဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ၊ သူ့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲ
Google Cassroom ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ